१३ वर्षीया बालिकालाई तीन वर्षदेखि निरन्तर बलात्कार गर्दै हजुरबुबा ! | जनदिशा
१३ वर्षीया बालिकालाई तीन वर्षदेखि निरन्तर बलात्कार गर्दै हजुरबुबा !
कोहलपुर, १९ भदौ । कोहलपुरकी १३ वर्षीया बालिका तीन वर्षदेखि निरन्तर बलात्कृत हुँदै आएको खुलासा भएको छ । परिवारकै सदस्यलाई यसबारे जानकारी हुँदा पनि उनी निरन्तर बलात्कृत हुँदै आएको खुलासा भएको पीडितका दाजुले गरेका छन् ।
बहिनी बलात्कारको पीडाले विक्षिप्त भएपछि बल्ल प्रहरीसमक्ष पुगेको दाजुले बताएका छन् । मैले आन्टी काकीलाई पटकपटक भनेकी थिएँ, काकीले चुप लाग भन्नुभयो ।
हजुरबुबाले कतै भनिस् भने मार्दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यसैले केहि बोलिनँ, बहिनीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।
उनी पहिलो पटक १० बर्षको हुँदा बलात्कृत भएकी थिइन् । नातिनी बलात्कार गर्ने हजुरबुवालाई परिवारका सदस्यले नै संरक्षण गर्दै आएको खुलासा भएको हो ।
परिवारका अरु सदस्यलाई बलात्कारबारे जानकारी भए पनि आफुलाई धम्क्याएर तर्साएर सार्वजनिक गरे मारिदिने भन्दै जघन्य अपराध दबाउन हजुरबुवाले नै दबाब दिएको पीडित किशोरीको भनाई छ ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
Previous Previous post: दराज फुटाएर रु ११ लाख ९३ हजार चोरीको रकमसहित मिलन श्रेष्ठ पक्राउ
Next Next post: ‘क्विन नेपाल–२०१८’ को उपाधि यचुश्रीलाई